BloodPressureDB အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
4.3 | 500,000+ ထည့်သွင်းရန်
ဒေါင်းလုပ် APK（5.5MB） ယခင်ဗားရှင်း
ကျောက်ကပ်လူနာများအတွက်ဂျာမန်အသင်းမှအကြံပြုထားသည်။ * Gesundheit konkret: smart assistant - app-solute အသုံးဝင်သော
appstar.tv ရှိထိပ်တန်းဆေးကုသမှုဆိုင်ရာထိပ်ဆုံး ၅ ခု။ NummerSicher မှကျွမ်းကျင်သူများမှအကြံပြုချက်။ ။ ယခုသင့်သွေးပေါင်ချိန်ကိုနေရာတိုင်းတွင်ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ သင်၏သွေးပေါင်ချိန်၊ သွေးကြောနှင့်အခြားအရာများနှင့်အတူသင်၏သွေးပေါင်ချိန် (နှလုံးကျုံ့ခြင်းနှင့် diastolic) ကိုစစ်ဆေးပြီးစောင့်ကြည့်ပါ။ စိတ်ဖိစီးမှုနှုန်းမြင့်မားသောသွေး၊ သကြားဓာတ်၊ ဆီးချိုရောဂါ၊ သွေးပေါင်ချိန်မြင့်မားမှုနှင့်နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ချေရှိသောသူများအတွက်သင့်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကိုပင်ခြေရာခံနိုင်သည့်လူနာများအတွက်လူနာများကိုခြေရာခံသည့်အရာဖြစ်သည်။
မြန်ဆန်လွယ်ကူပြီးမြန်ဆန်စွာမှတ်တမ်းတင်ရန်အတွက် BP Monitor ။ ဆရာဝန်ကသူရဲ့ရောဂါရှာဖွေမှုကိုအထောက်အကူပြုမယ့်ဇယားကွက်ကိုအံ့အားသင့်စေပါလိမ့်မယ်။
* သင်၏နှလုံးသွေးကြောနှင့်သွေးကြောဆိုင်ရာသွေးဖိအားကိုအချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းလွယ်ကူစွာမှတ်တမ်းတင်ပြီးသိမ်းဆည်းပါ။ - Bluetooth စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည့်ကိရိယာများအားပံ့ပိုးခြင်း။ * အနာဂတ်အတွက်လေ့လာသုံးသပ်မှုအတွက်မှတ်ချက်ပေးနိုင်သည့်သင်၏သွေးလွှတ်ကြောဖိအားနှင့်ပတ်သက်သောအထောက်အကူပြုသောဇယားများနှင့်စာရင်းဇယားများ။ * သင်၏အသေးစိတ်ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန်သတ်မှတ်ထားသောအချိန်အတိုင်းအတာအတွက်ဇယားပါသော PDF အစီရင်ခံစာ။ အီးမေးလ်ပို့ရန် (သို့) ပုံနှိပ်ရန်။ * သင်၏သိုလှောင်ထားသည့်သွေးပေါင်ချိန်ကိုကြည့်ရှုရန်ကိရိယာအမျိုးမျိုးကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ခြင်းဖြင့်အသုံးပြုခြင်း။ * သင်၏ဆေးဝါးများကိုစီမံပြီးသင့်ဆေးများမည်မျှကြာရှည်သည်ကိုကြည့်ပါ။ * ဖြစ်နိုင်ခြေအလားအလာဆိုင်ရာအချက်အလက် (အလေးချိန်ကိုခြေရာခံ၊ သွေး) သကြား၊ ခန်ဓာကိုယ်အပူချိန်၊ ဝင် / ထွက်)
* သင့်ခန်ဓာကိုယ်ထုအချိုးကိုခြေရာခံနိုင်ရန်ဆားငန်ဂဏန်းတွက်စက်နှင့် BMI ဂဏန်းတွက်စက်။ * သွေးတိုးရောဂါ၊ ဆီးချိုရောဂါနှင့်နှလုံးရောဂါတို့ကိုတိုက်ဖျက်ရန်သင်၏ကျန်းမာရေးအတွက်။ ။ * တတိယပါတီများနှင့်အချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်မည်မဟုတ်ကြောင်းသေချာစေရန်အမည်ဝှက်သို့မဟုတ်ကလောင်အမည်ဖြင့်အသုံးပြုမှု။ HealthOn အက်ပလီကေးရှင်းများမှစိတ်ချရသောကျန်းမာရေးအချက်အလက်အတွက်ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းများနှင့်အတူ (V5.26)
ထောက်ပံ့ထားသော Bluetooth ကိရိယာများ -
- Beurer BM 54, BC 57, BM 57, BM 77, BM 85, BC 85
- Crane ချိတ်ဆက်မှု Bluetooth
- Medisana BW 300 ချိတ်ဆက်မှု၊ BU 530 ချိတ်ဆက်မှု၊ BU 550 connect, BU 575 ချိတ်ဆက်မှု၊ SL 100 ဆက်သွယ်မှုစနစ် - Sanitas (SBC 53, SBM 37, SBM 67)
- Silvercrest SBM 68
အခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ကင်းရှင်းသည်။ သင်သည်တစ်ကြိမ်တည်းအခမဲ့စာရင်းသွင်းနိုင်သည်။ လျှို့ဝှက်အချက်အလက်များကိုထည့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။ သင်၏လော့အင်ဖြင့်အခြားကိရိယာများနှင့်လည်းထပ်တူပြုနိုင်သည်။
ဤအပလီကေးရှင်းသည်အချို့သောလုပ်ဆောင်ချက်များအတွက်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုလိုအပ်သည်။ အော့ဖ်လိုင်းအသုံးပြုမှုလည်းဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့သော်တစ်ကြိမ်ဝင်ရောက်ရန်လိုအပ်သည်။
ဤအက်ပလီကေးရှင်းသည်အသုံးပြုသူပေါင်းများစွာ၏ login နှင့်အမြန်ပြောင်းခြင်းကိုထောက်ပံ့သည်။
သတိပြုရန် - ဤ app သည်သင်၏သွေးပေါင်ချိန်ပမာဏကိုသိုလှောင်ရန်ဖြစ်သည်။ ။ ၎င်းကိုတိုင်းတာ။ မရပါ။
[email protected] ရှိသင့်ထင်မြင်ချက်များသို့မဟုတ်အကြံပြုချက်များဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏အက်ပလီကေးရှင်းကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဘာအသစ်လဲ BloodPressureDB 7.1.4
- When addinganew measurement the graph now updates the displayed date properly again.
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ.....
Hamdard Media Group Canada
#Burning Of Vertex#Burning of Top of Head#खोपड़ी के ऊपरी भाग में जलन का कारण और इलाज#सिर में जलन
How to Impress any Girl? –6Tips & 40 English Sentences – English Speaking Lesson in Hindi
अगर हमेशा रहता है सर में भारीपन और दर्द तो जानिए क्या इसके पीछे का कारण और इसका उपाए
ayurved aur gharelu nuskhe
ये लक्षण नजर आए तो समझो ब्रेन ट्यूमर है || brain tumor symptoms || brain tumor symptoms and cure hd
ကျန်းမာရေး နှင့် ကြံ့ခိုင်ရေး
Pro Retouch - body & face photo editor selfie